ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးဖြစ်လာတဲ့ တရုတ်ရေတပ်နှင့် အနာဂါတ် သုံးသပ်မှု - Knowledgeworms
March 7, 2021 September 10, 2021 AuroraLeaveaComment on ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးဖြစ်လာတဲ့ တရုတ်ရေတပ်နှင့် အနာဂါတ် သုံးသပ်မှု
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်ဟာ တိုက်ပွဲဝင် စစ်ဝတ်စုံဖြင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက် ရေး တပ်မတော် ရေတပ်ဖျက် သင်္ဘော တစ်စီးပေါ်သို့ တက်ရောက်လာ ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ့ ဧပြီလမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရေတပ် အခင်းအကျင်းဟာ ကွန်မြူနစ်ပါတီ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အကြီးဆုံးသော ရေတပ် အခင်းအ ကျင်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး သင်္ဘောပေါင်း ၄၈ စီး၊ လေယာဉ် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာနဲ့ စစ်သည် ဦးရေ ၁ သောင်းကျော် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
မော်စီတုန်းပြီးနောက် တိုင်းပြည်၏ အင်အားအရှိဆုံး ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ သမ္မတ ရှီအတွက်တော့ အဲဒီ့နေ့ဟာ ကြီးမားတဲ့ ရည်မှန်းချက် ဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ သမုဒ္ဒရာ ၇ ခုမှာ တရုတ်၏ ကြီးမြတ်မှုနှင့် သြဇာ အာဏာကို ဖော်ပြနိုင်မယ့် တပ်ဖွဲ့ကြီးကို ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတရှီက အင်အားကြီးတဲ့ ရေတပ်တခုကို အရေးတကြီး တည်ဆောက်ဖို့ရာ ဒီနေ့အဖို့ မလို အပ်တော့ပါဘူး လို့ အဲဒီ့နေ့မှာ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် ရေတပ် ထောက်လှမ်းရေးမှ တရုတ် တိုက်ပွဲဝင် စစ်သင်္ဘော အရေအတွက်ဟာ ၂၀၂၀ အကုန်မှာ ၃၆၀ လောက်အထိ ရှိလာမှာ ဖြစ်ပြီး အရေအတွက်အားဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေတပ် တခု ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတာပါ။
အမေရိကန် အနေနဲ့တော့ ၎င်းရဲ့ လက်ရှိ စစ်သင်္ဘော ၂၉၇ စီးမှ ၃၅၅ စီး အထိ တိုးမြှင့် တည် ဆောက်သွားမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်အချိန်မှာ ပြီးဆုံးမယ် ဆိုတာကိုတော့ မသိရပါဘူး။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ သမ္မတရှီဟာ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ကို ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ တပ်မတော်အဖြစ် အမေရိကန်နှင့် အဆင့်တန်းတူ ရှိလာစေရန် ပြောင်းလဲမှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။
သူဟာ ယနေ့ဖြစ်လာတဲ့ အင်အားကြီးတဲ့ ရေတပ်အဖြစ် လမ်းခင်းပေးခဲ့တဲ့ သင်္ဘောကျင်းများ နှင့် နည်းပညာများ အပေါ်မှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အနည်းဆုံး တိုင်းတာမှု တစ်ခုအရတော့ သမ္မတရှီရဲ့ အစီအစဉ်ဟာ အလုပ်ဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ နှင့် ယနေ့ကြားမှာ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ရေတပ်တခုကို ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ ၎င်းတို့၏ ကမ်းခြေမှ ဝေးကွာတဲ့ နေရာများမှာပါ အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြစ်လာစေဖို့ လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်၏ ရေတပ်မှာ စစ်သင်္ဘောပေါင်း ၂၅၅ စီးသာ ရှိတယ်လို့ အမေရိကန် ရေတပ် ထောက်လှမ်းရေး ရုံး ONI (Office of Naval Intelligence) မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ONI ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အကုန်လောက်မှ အမေရိကန်ရေတပ်ထက် အစီးရေ ၆၀ ကျော် ပိုမိုလာပြီး စစ်သင်္ဘောပေါင်း ၃၆၀ ထိ ရှိလာပြီလို့ သိရပါတယ်။
နောင်လာမယ့် ၄ နှစ်တာကာလမှာ စစ်င်္ဘောပေါင်း ၄၀၀ လောက်အထိ ရှိလာမယ့်လို့ ONI က ခန့်မှန်းပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကို ပြန်သွားရင် အရေအတွက်ဟာ သိသိသာသာကို ကွာခြားမှုတွေ ရှိလာတာပါ။
အမေရိကန် ရေတပ်၊ မရိမ်းတပ်ဖွဲ့နှင့် ကမ်းခြေစောင့် တပ်များ၏ ဒီဇင်ဘာလက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာအရ တရုတ်ရေတပ်ဟာ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအတွင်း အင်အား ၃ ဆလောက်အထိ တိုး ပွား လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေတပ်ဖြစ်လာတဲ့ တရုတ်ဟာ လက်ရှိမှာ ခေတ်မှီ ရေပြင်သွား တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်များ၊ ရေငုပ်သင်္ဘောများ၊ လေယာဉ် တင်သင်္ဘောများ၊ တိုက်ခိုက်ရေး လေယာဉ်များ၊ ကုန်းရေ နှစ်သွယ် စစ်ဆင်ရေး သင်္ဘောများ၊ တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးတင် နျူကလီးယားရေငုပ် သင်္ဘောများ၊
ကမ်းရိုးတန်းစောင့်ရေယာဉ်ကြီးများ နှင့် ရေခဲခွဲသင်္ဘောများ ကို ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့ တည်ဆောက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Type 055 ဖျက်သင်္ဘော တစ်စီး
အဲဒီ့တည်ဆောက်နေတဲ့ သင်္ဘောများထဲမှ တချို့ဟာ အမေရိကန် သို့မဟုတ် တခြား ရေတပ်အင်အားစုများနှင့် ညီမျှ သို့မဟုတ် ပိုမိုစွမ်းအား ရှိနိုင်ကောင်း ရှိနိုင်မှာပါ။
အမေရိကန် ရေတပ် ကောလိပ်ရှိ တရုတ် ရေကြောင်းလေ့လာရေး ဌာနမှ အင်ဒရူး အဲရစ်ဆင်က
“တရုတ် ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး ရေတပ်ဟာ အသုံးမကျတဲ့ စစ်သင်္ဘောတွေကို ၎င်းတို့ရဲ့ သ င်္ဘောကျင်းကနေ လက်ခံရရှိနေတာ မဟုတ်ဘဲ ပိုမို ခေတ်မှီ ဆန်းပြားပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ရှိတဲ့ သင်္ဘောများကို လက်ခံရရှိနေတာ ဖြစ်တယ်”
လို့ ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလက စာတမ်းမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို ခေတ်မှီတဲ့ စစ်သင်္ဘောတွေထဲမှာ Type 055 လို အမေရိကန်တို့၏ Ticonderoga အတန်းအစား ဒုံးတင် ခရူဇာများထက် ပစ်အားပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဖျက် သင်္ဘောတွေ ပါဝင်ပြီး၊
တရုတ်စစ်သည် ထောင်ပေါင်းများစွာကို နိုင်ငံခြား ကမ်းခြေများသို့ ပို့ ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် ကုန်းရေ နှစ်သွယ် ခြေမှုန်းရေး သင်္ဘောတွေ ပါဝင်နေတယ်လို့ လေ့လာသုံးသပ်သူ အချို့က ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်ရေတပ်က ဘယ်လိုနေရာမှာ ရပ်တည်နေသေးလဲ
၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှာ စစ်သင်္ဘော ၄၀၀ လောက် ပိုင်ဆိုင် လာမယ် လို့ မျှော်လင့်ထားသော် လည်း အမေရိကန်၏ လက်ရှိ သင်္ဘော တည်ဆောက်ရေး ရည်မှန်းချက်မှာ ၃၅၅ စီးဖြစ်ပြီး မည်သည့်အချိန်တွင် ပြီးဆုံးမည်ဆိုသည်မှာ မသတ်မှတ် ရသေးပါဘူး။
ဒါဟာ အရေအတွက်အားဖြင့် အများအပြား ကွာခြားချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ကြည့်ပြီး အမေရိကန်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေတပ်တခု အဖြစ်က အဆုံးသတ်သွား ပြီလားလို့တော့ ပြောလို့ မရပါဘူး။
စစ်သည် အရေအတွက် အားဖြင့် အမေရိကန် ရေတပ်က ပိုမိုများပြားတဲ့ အင်အား ၃ သိန်း ၃ သောင်း ကျော်ရှိပြီး တရုတ်ရေတပ်ကတော့ အင်အား ၂ သိန်း ခွဲ သာ ရှိပါတယ်။
လေ့လာသုံးသပ်သူများက ဒီအချက်အပြင် အခြား အချက်များဖြင့်လည်း အမေရိကန် ရေတပ်က သာလွန်နေတာကို ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
တန်ချိန်အားဖြင့် အမေရိကန် ရေတပ်သင်္ဘောများရဲ့ တန်ချိန်ဟာ ပိုမိုများပြားပြီး လမ်းညွှန်ပဲ့ထိန်းဒုံးတင် ဖျက်သင်္ဘောနှင့် ခရူဇာ စစ် သင်္ဘော များဟာ တရုတ်သင်္ဘောများထက် ပိုကြီးပြီး လက်နက်များ ပိုမို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အဲဒီ့ သင်္ဘောများဟာ အမေရိကန် ရေတပ်၏ ခရုဇ်ဒုံးကျည်များ ပစ်လွှတ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကို သိသာ ထင်ရှားစေပါတယ်။
အဆိုပါ သင်္ဘော စုစုပေါင်းတွင် ဒေါင်လိုက် ပစ်လွှတ်နိုင်တဲ့ VLS ပြွန်ပေါင်း ၉ ထောင်လောက် ပါဝင်ပြီး တရုတ် သင်္ဘောများမှာတော့ ၁ ထောင်ကျော် သာ ပါဝင်တယ်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ လေ့လာမှု အင်စတီကျုမှ ကာကွယ်ရေး လေ့လာသူ နစ်ခ် ချိုင်းစ် က ပြောပါတယ်။
တချိန်ထဲမှာပဲ အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်ရေး ရေငုပ်သင်္ဘော ၅၀ ( အမေရိကန်တွင် စုစုပေါင်း ရေ ငုပ်သင်္ဘော ၆၈ စီးရှိကာ အားလုံးမှာ နျူကလီးယား စွမ်းအင်သုံး ဖြစ် )ဟာ နျူကလီးယား စွမ်း အင် သုံးဖြစ်သည့်အတွက် သွားလာနိုင်သည့် အကွာအဝေးမှာ ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ စစ်ဆင်နိုင်သည့် အချိန်ကာလမှာလဲ များစွာ သာလွန်ပါတယ်။
တရုတ် ရေတပ်မှာရှိတဲ့ တိုက်ခိုက်ရေး ရေငုပ် သင်္ဘော ၆၂ စီးမှာ ၇ စီးသာ နျူကလီးယား စွမ်း အင် သုံးဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံနှင့် နီးကပ်တဲ့ နေရာမှာတော့ တရုတ်ရေတပ်မှာ ရှိတဲ့ အရေအတွက်ဟာ ပေကျင်းကို မျက် နှာသာ ပေးမှု ဖြစ်စေပါတယ်။
“တရုတ်ရေတပ်ရဲ့ အမေရိကန်ရေတပ်ထက် အားသာချက်ကတော့ ပိုမိုများပြားတဲ့ ကင်းလှည့် နှင့် ကမ်းခြေစောင့် တိုက်ခိုက်ရေးဖွဲ့များ သို့မဟုတ် ကော်ဗက်ဒုံးတင်သင်္ဘောများ နှင့် အဲဒီ့ထက် သေးငယ်တဲ့ သင်္ဘောများ ပိုမို ပိုင်ဆိုင်တာ ဖြစ်တယ်” လို့ ချိုင်းစ်က ဆိုပါတယ်။
ဒီသင်္ဘောတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကမ်းရိုးတန်းစောင့် နှင့် ရေကြောင်းစစ်တပ်ကနေ တိုးချဲ့ထားတာ ဖြစ်ပြီး တရုတ်ရေတပ်၏ စုစုပေါင်းအင်အားကို ၂ ဆနီးပါးအထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ တရုတ်ထက် ပိုမိုကြီးမားတဲ့ ကူးစက် ကပ်ရောဂါ နှင့် ဘတ်ဂျက် ပြသနာများကို ဖြေရှင်းနေရတဲ့ ဝါရှင်တန်အဖို့ စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ လက္ခဏာများ ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာ သုံးသပ်သူများကတော့ တရုတ်ဟာ နှစ်စဉ် ကာကွယ်ရေး ဘတ်ဂျက်ကို ၆.၈ % လောက် တိုးမြှင့်မယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ခြင်း ကြောင့် ပေကျင်း၏ အလားအလာကို စိုးရိမ် နေကြပါတယ်။
Defence-Blog အရ တရုတ်ဟာ ယခုနှစ်မှာ ကာကွယ်ရေးစရိတ်ကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၀၉ သန်းလောက်အထိ အသုံးပြုမယ်လို့ ကြေငြာခဲ့တာပါ။
ဒါဟာ အမေရိကန်ရဲ့ လက်ရှိ ဘတ်ဂျက် ၇၄၀.၅ ဘီလီယံရဲ့ လေးပုံတပုံ ကျော် လောက်သာ ရှိပေမယ့် အနာဂါတ်မှာ ဒီထက် တိုးမြှင့်လာကောင်း လာနိုင်ပါတယ်။
သင်္ဘောတည်ဆောက်မှုမှာ တရုတ်နိုင်ငံကို မည်သူမှ မယှဉ်ပြိုင်နိုင်သေး
သင်္ဘောများစွာကို မတည်ဆောက်နိုင်ပါက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေတပ် ရှိလာနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စီးပွားဖြစ် သင်္ဘော တည်ဆောက်တဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်လာတဲ့အလျှောက် စစ်သင်္ဘော အများအပြား တည်ဆောက် လာနိုင် ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ သင်္ဘော တည်ဆောက်မှု ဈေးကွက်၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို တန်ချိန်အားဖြင့် ရရှိခဲ့တယ်လို့ ကုလ သမဂ္ဂ က မဟာဗျူဟာနှင့် နိုင်ငံတကာလေ့လာရေး စင်တာတွင် တရုတ် စွမ်းအင် စီမံကိန်းကို ကိုးကားပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတော့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် သင်္ဘောထုတ်လုပ်ရေးမှာ ဒုတိယနေရာ လိုက်နေပါတယ်။
သမိုင်း ရှုထောင့် အရ တရုတ်နိုင်ငံ၏ သင်္ဘော တည်ဆောက်နိုင်မှုဟာ အံ့အားသင့် စရာ ကောင်းလောက်အောင် အမေရိကန်ရဲ့ ဒုတိယ ကမ္ဘာ့စစ်ကာလ သင်္ဘော တည် ဆောက် နိုင်သည့် ပမာဏကို မှေးမှိန်သွားစေပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဟာ ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ တနှစ်တာ ကာလအတွင်း (၂၀၁၉) မှာ ဒုတိယကမ္ဘာ့စစ်အတွင်း အမေရိကန်တို့ ၄ နှစ်လောက် (၁၉၄၁ မှ ၁၉၄၅) တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ သင်္ဘောအရေအတွက်ထက် ပိုမို တည်ဆောက် နိုင်ခဲ့ လို့ပါ။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အရေးပေါ် သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး ကာလ အတွင်းမှာ နိုင်ငံနှင့် မိုင်ထောင် ပေါင်း များစွာ ဝေးကွာတဲ့ စစ်ပွဲ ၂ ခုရှိ ကြီးမားတဲ့ စစ်တပ်များအား ထောက်ပံ့ပေးရာမှာ အမေရိကန် သင်္ဘော တည်ဆောက်ရေးဟာ တနှစ်လျှင် တန်ချိန် ၁၈.၄ သန်း နှင့် အဆုံးအစွန်အထိ
ထုတ် လုပ်ခဲ့ရပြီး စစ်ကြီး ပြီးချိန်မှာ ကုန်တင်သင်္ဘော တန်ချိန် ၃၉ သန်းခန့်အထိ ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ် လို့ အမေရိကန် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စင်တာမှ အကြီးတန်းအရာရှိ နှင့် ရေတပ် ဗိုလ်ကြီးဟောင်း သောမတ်စ်ရှဂတ်က ပြီးခဲ့တဲ့လက ကွန်ဂရက်မတိုင်မှီမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“တရုတ်ကတော့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၉ မှာတောင် တန်ချိန်ပေါင်း ၂၃ သန်းလောက် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ကုန်တင်သင်္ဘော တန်ချိန် သန်း ၃၀၀ လောက် တင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်” လို့ ရှဂတ်မှ ပြောပါတယ်။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး သင်္ဘောများ ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ တရုတ်အစိုးရပိုင် ကုမ္ပဏီများဟာ ရေတပ်တည်ဆောက်မှု၏ အင်ဂျင်များ ဖြစ်နေပါတယ်။
စစ်ပွဲကာလများမှာ စီးပွားရေးသုံးသင်္ဘောများ အပါအဝင် ပိုလျှံနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်မှု စွမ်းအားဟာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်မှု များကို အလျှင် အမြန် ပြုလုပ်နိုင်မယ့် အပြင်
နောက်ထပ် တပ်ဖွဲ့များကိုပါ ထုတ်ပေးနိုင်မယ့် စွမ်းရည်ကို ပိုမို တိုးမြှင့်နိုင်တဲ့ အကြောင်းကို အဲရက်ဆင်က မနှစ်က အမေရိကန် ရေတပ်ကောလိပ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားဖြစ် သင်္ဘောများ ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ အခြေခံအဆောက် အုံများ၊ လုပ်သားအင်အားများ နှင့် နည်းပညာများဟာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောများကို ထုတ်လုပ်ဖို့ရာ ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း ရှိနေပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးနဲ့ ၂၀၁၄ ကနေ ၂၀၁၈ အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ က ဂျာမနီ၊ အိန္ဒိယ၊ စပိန် နှင့် ဗြိတိန်တို့ထက် ရေငုပ်သင်္ဘောတွေ၊ စစ်သင်္ဘောတွေ၊ ကုန်းရေ နှစ်သွယ် စစ်ဆင်ရေး သင်္ဘောတွေ နဲ့ အရန်တပ်တွေကို ပိုမို တည်ဆောက် နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလို တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ သင်္ဘော တည်ဆောက်နိုင်နှုန်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ စစ်သင်္ဘောသစ်များရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့် ၎င်းတို့၏ ကမ်းရိုး တန်း ကာကွယ်ရေး ရေတပ်မှသည် ဒေသတွင်း အင် အားအကြီးဆုံး ရေတပ်အဖြစ် ရပ်တည်လာကာ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်လှမ်း မှီမှုနှင့် အတူ ဆက် လက်တိုးတက်လာပါက ကမ္ဘာ့အဆင့် စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ရေး ရေတပ် တည်ဆောက် ရန်ကိုပါ အဆင်သင့် ရှိနေပြီလို့ ရှဂတ် က CNN သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပေကျင်းဟာ ကော်ဗက်ဒုံးတင်သင်္ဘောတွေ၊ ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘောတွေ နှင့် ဒီဇယ်လျှပ်စစ် အင်ဂျင်သုံး ရေငုပ်သင်္ဘောတွေ စတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ပိုင်နက်ဝန်းကျင်မှာ အသုံးတည့်မယ့် သင်္ဘောများကို အာရုံစိုက်ပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့အတွက် ရေတပ်တည်ဆောက်ရာမှာ စနစ်ကျတယ်လို့ တော်ဝင် ယူနိုက်တက် ဝန်ဆောင်မှုများ အင်စတီကျုမှ သုတေသန ပညာရှင် ဆစ်ဟာ့သ် ခါရှယ် ကပြောပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဟာ Type 056 ကော်ဗက် (Type 056 များအကြောင်း ရေးပြီး) ရေယာဉ် အသေးစား ပေါင်း ၇၅ စီးလောက်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဖရီးဂိတ်နှင့် အရွယ်အစား အနီးစပ်ဆုံးတူ အမေရိကန် ကမ်းရိုးတန်း တိုက်ခိုက်ရေး သင်္ဘော အရေအတွက်နှင့် ယှဉ်ပါက အလွန်ကွာခြားပြီး အမေရိကန်တွင် ၁၅ စီးသာ ရှိပါတယ်။
Type 056 ကော်ဗက် စစ်သင်္ဘော တစ်စီး
ကော်ဗက်ရေယာဉ် တပ်ဖွဲ့များဟာ ပိုမို လုံခြုံ ဖို့ လိုတဲ့၊ သမုဒ္ဒရာ ရေတိမ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်တို့ အဓိက စိုးရိမ်နေတဲ့ တောင် တရုတ် ပင်လယ်၊ ထိုင်ဝမ် ဝန်းကျင်နှင့် အရှေ့ တရုတ်ပင်လယ် ဂျပန်နိုင်ငံ တဝိုက်ရှိ အငြင်းပွားနေသည့် ဆန်ကာကူ (တရုတ်အခေါ် တျောင်းယွီ) ကျွန်းများအတွက် ရည်ရွယ် ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ကမ်းရိုးတန်းအနီး သွားလာနေတဲ့ တရုတ်ရေတပ်ရဲ့ သင်္ဘောများကိုတော့ ကြီးမားတဲ့ မြေပြင် အခြေစိုက် ဒုံးကျည် တပ်ဖွဲ့များဖြင့် အကာအကွယ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဒုံးကျည်များဟာ အမေရိကန်၏ တရုတ်အပေါ် သြဇာ သက်ရောက်ဖို့ကို ပြသနာတရပ် ဖြစ်လာစေပြီး ၎င်း၏ ရေတပ်နှင့် လေတပ်ရဲ့ စွမ်းအင်များကို တရုတ်ပြည်မကြီး အထိ မသက် ရောက်နိုင်အောင် တားဆီး ထားနိုင်ကြောင်း ခါရှယ် ကပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တရုတ်ရဲ့ အင်အား ကြီးထွားမှုကြောင့် အမေရိကန်က ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေအပေါ် ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ ရေကြောင်း ဆက်သွယ်မှုတွေ ပြတ်တောက်ပါက အဲဒီ့နိုင်ငံတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ရင်ဆိုင်ဖို့ အားနည်းလာနိုင်တဲ့ အတွက် အဆိုပါ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေအပေါ် အမေရိကန်ရဲ့ သြဇာ သက်ရောက်ဖို့ရာ ကိုတော့ ပိုမို လွယ်ကူစေပါတယ်။ လို့ ခါရှယ်က ပြောပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် အမေရိကန် ရေတပ်ဟာ တရုတ်ဒုံးကျည် များရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု တွေကြောင့် တောင် တရုတ်ပင်လယ် အတွင်းမှာ စစ်ဆင်မှု မပြုလုပ်နိုင်ပါက ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့ရာ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်စစ်ဘက် ခေါင်းဆောင်များဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ရေတပ်ဟာ သင်္ဘော များသထက် များလာတာကို သတိပြုမိကြပါတယ်။
အမေရိကန် ရေတပ် စစ်ဆင်ရေးဌာန အကြီးအကဲ ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုက်ခ် ဂေဒေးက Breaking Defense နှင့် အင်တာဗျူးမှာ “တရုတ်နိုင်ငံဟာ တကယ်ပဲ ရေတပ်မှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ လုပ်နေတာ ကြည့်ပါဦး” လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် “ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သင်္ဘောတွေအများကြီးကို တည်ဆောက်နေတဲ့အပြင် သင်္ဘောများကို ပစ်မှတ်ထား ရှာဖွေ ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ သင်္ဘောဖျက်ဒုံးကျည်များနဲ့ ဂြိုဟ်တုစနစ်များအပေါ်မှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ အများကြီး ပြုလုပ်နေတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါတွေအားလုံးဟာ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နီးစပ်တဲ့ မည်သည့် ပြသနာကိုမဆို တရုတ်ဟာ ကောင်း ကောင်း ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအင်တွေ ရှိလာစေပါတယ်။ တရုတ်ကတော့ ဒီလို တိုးချဲ့မှုတွေဟာ ၎င်း၏ စစ်ရေးအရ ခုခံကာကွယ်ဖို့ အတွက်သပ်သပ်သာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ခေတ်သစ်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး” လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံ ၂၀၁၉ အစိုးရ ကာကွယ်ရေး စာတန်းမှာ “တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားကာကွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှုဟာ ၎င်းတို့၏ မှန်ကန်တဲ့ လုံခြုံရေး လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်နှင့် ကမ္ဘာ့ ငြိမ်း ချမ်းရေး အင်အားကို တိုးပွားစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်တယ်” လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
“တရုတ်နိုင်ငံဟာ မည်သည့် နိုင်ငံကိုမှ ခြိမ်းခြောက်မည် သို့မဟုတ် လွှမ်းမိုးမှု ပြုလုပ်မည် မ ဟုတ်”
ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း အဘယ်ကြောင့် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောများ၊ ကုန်းရေ နှစ်သွယ်စစ်ဆင်ရေး သင်္ဘောများ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အဝေးသို့ စစ်ဆင်နိုင်သည့် ကြီးမားပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဖျက်သင်္ဘောများနှင့် ခရူဇာသင်္ဘောများ တည်ဆောက်နေသလဲ ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ကမ်းနီး နှင့် ကမ်းဝေး ပင်လယ်ပြင် ကာကွယ်ရေး
တရုတ် ပြည်မကြီး နှင့် ၎င်း၏ ပိုင်နက်လို့ ကြေငြာထားတဲ့ ဒေသတွေကို ကာကွယ်ခြင်းကို တရုတ်တို့က “အနီးအနား ပင်လယ်ပြင် ကာကွယ်ခြင်း”လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ရေတပ် တည်ဆောက်မှုဟာ ၎င်း ပိုင်းဆိုင်တယ်လို့ ကြေငြာထားတဲ့ စကွဲယား ကီလိုမီတာ ၃.၃ သန်းလောက် ရှိတဲ့ (စကွဲယားမိုင် ၁.၃ သန်း) တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာ သောင်ပြင်နှင့် သန္တာကျောက်တန်းငယ် များကို များပြားတဲ့ ဒုံးကျည်များနှင့် ကာကွယ်ထားပြီး လေယာဉ် ပြေးလမ်း တွေ လက်နက် စနစ်တွေ ပါဝင်တဲ့ လူလုပ်ကျွန်းတဲ့များ တည် ဆောက်မှုများ ဖြင့် စစ်အင်အား ဖြည့်တင်းမှုများနှင့် တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။
“တောင်တရုတ် ပင်လယ်ရှိ ကျွန်းများနှင့် သန္တာကျောက်တန်းများဟာ နိုင်ငံ အချုပ်အခြာ အာ ဏာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ပင်လယ်ပြင်တွင် စစ်တပ်တည်ရှိခြင်း တို့ကို ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရာ အားသာချက်များ ရှိတယ်”
လို့ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာထုတ် ပေကျင်း အခြေစိုက် တရုတ်ရေတပ်ကို ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံပိုင် သင်္ဘောထုတ်လုပ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ရေကြောင်းနှင့် ကုန်သွယ်ရေး သင်္ဘောများဆိုင်ရာ မဂ္ဂဇင်း မှ ဆောင်းပါးတခုတွင် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါဆောင်းပါးမှာပဲ တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်ချိန်တွင် စစ်ကူများကို တောင်ပိုင်းရှိ စစ်စခန်းများကို ရောက်ရှိရန် တရုတ် တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှ တစ်ရက်ခန့် ကြာမြင့် နိုင်သောကြောင့် ၎င်းဒေသများကို ဒီအတိုင်း မထားသင့်ကြောင်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
နယ်မြေ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကို တိုးမြင့်လာစေရန် အနီးအား ပင်လယ်များတွင် အရင်းအမြစ်များ စုဆောင်းခြင်းဟာ တရုတ်နိုင်ငံကို ပြသနာများ ဖြစ်လာနိုင်စေတယ်လို့ တချို့က ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ရပ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ရေကြောင်းသွားလာရေး လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့နိုင်ကာ ပြည်ပမှ အရေးကြီးသည့် ပစ္စည်းများကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်မှ အကြီးတန်းထောက်လှမ်းရေး လေ့လာသူ ဂျနီဖာ ရိုက်စ် နှင့် အဲရစ် ရော့ဘ် တို့က
“တရုတ်နိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးအပေါ် မူတည်ပြီး ရေလက်ကြားနှင့် ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေး လမ်း ကြောင်း ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ ပြသနာ သို့မဟုတ် စစ် ဖြစ်လာတာနဲ့ တ ရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပင်လယ်ပြင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို ဖြတ်တောက် ပစ်နိုင်ပါတယ်”
လို့အမေရိကန် ရေတပ် ကောလိပ်၏ တရုတ်ရေတပ် လေ့လာရေး အင်စတီကျု အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့လက စာတမ်းမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်၏ စစ်အင်အားကို ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားအပေါ် သက်ရောက်စေရန် တရုတ်ဟာ “ကွာဝေးတဲ့ ပင်လယ်ပြင် ကာကွယ်ရေး” ကို စတင် အကောင်အထည် ဖော်နေတယ်လို့ သူတို့က ဆိုပါတယ်။
“ကွာဝေးတဲ့ ပင်လယ်ပြင် ကာကွယ်ရေး ဆိုတာ တရုတ်လွတ်မြောက်ရေး ရေတပ်ရဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသွားဖို့ ပေကျင်းရဲ့ ဦးတည်ချက်ကို ထင်ဟပ်နေစေပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး နှင့် ယဉ် ကျေးမှုဆိုင်ရာ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး တိုးချဲ့ဖို့ ပေါ်လစီရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်တယ်” လို့ ရိုက်စ်နဲ့ ရော့ဘ်က ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ ဘာကို ရည်ညွှန်းနေတာလဲ ဆိုတော့ အမေရိကန်တို့၏ ဆယ်စုနှစ်များစွာ နိုင်ငံရေပြင်မှ ဝေးကွာသည့် ဒေသများသို့ လေယာဉ်တင် သင်္ဘောများ ကို အသုံးပြုပြီး စစ်ရေး သြဇာ သက် ရောက်နိုင်တဲ့ ပုံရိပ်ကို တရုတ်တို့ အရူးအမူး လိုချက် မက်မောနေတာပဲ ဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
“တရုတ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လေ့လာ သုံးသပ်သူအချို့ က တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်‌ရေး တပ်မတော်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြား အကျိုး စီးပွားကို ကာကွယ်ရန် အလွန် အရေးကြီးပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ စွမ်းအားကြီးတဲ့ ပုံရိပ်ကို တည်ဆောက်ဖို့ရာ ရေတပ်ကို စေလွှတ်ခြင်းဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တယ်လို့ အကြံပေးထားတယ်” လို့ ရိုက်စ်နဲ့ ရော့ဘ်က ဆိုပါတယ်။
ဒီလို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့ ကော်ဗက် စစ်သင်္ဘောငယ်တွေ လောက်နဲ့ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။
တရုတ် လေယာဉ်တင် သင်္ဘော ၂ စီးအား အတူတကွ တွေ့ရစဉ်
ဒါ့ကြောင့် တရုတ်ဟာ သူတို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်လိုက်ပြီး ပိုမိုဝေးကွာအောင်သွားလာနိုင်ဖို့ လက်ရှိ အသုံးပြု နေတဲ့ ဒီဇယ် လျှပ်စစ် သင်္ဘောများ အစား လမ်းညွှန် ပဲ့ထိန်း ဒုံးတင် ခရူဇာ သင်္ဘော များ နှင့် နျူကလီးယား စွမ်းအင်သုံး ရေငုပ်သင်္ဘောများပါဝင်တဲ့ လေယာဉ်တင် သင်္ဘော တပ်ဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းနေပါတယ်။
လက်ရှိ တရုတ်ရေတပ်မှာ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ၂ စီးရှိနေပြီ ဖြစ်သော်လည်း လောင်စာဆီ မဖြည့်တင်းဘဲ ပင်လယ်ပြင်မှာ တပတ်လောက်သာ သွားလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဒီလေယာဉ်တင် သင်္ဘောတွေဟာ ဝေးကွာတဲ့ သမုဒ္ဒရာတွေထက် တောင်တရုတ် ပင်လယ်ပြင် နှင့်သာ သင့်တော်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာ နောက်ထပ်‌ လေယာဉ်တင် သင်္ဘောတွေ စီမံ ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။
လာမယ့် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသစ်မှာ နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖို ကို စွမ်းအင် အဖြစ်အသုံး ပြုမှာ ဖြစ်ပြီး လေယာဉ် တွေကို လောင်စာ နှင့် လက်နက်တွေ ပိုမို သယ်ဆောင် စစ်ဆင်နိုင်ဖို့ ကူညီ ပေးမယ့် အီလက်ထရို မဂ္ဂနက်တစ် လောက်လွှဲ တွန်းတင် စနစ်တွေပါ တပ်ဆင်လာဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
ရိုက်စ် နှင့် ရော့ဘ်တို့က တရုတ်၏ ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၁၉ ကာကွယ်ရေး စက္ကူဖြူ စာတမ်း ၂ စောင်ကို ထောက်ပြပြီး ခရီးရှည်သွား ရေတပ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းမှု ထိန်းသိမ်းရေး၊ သ ဘာဝ အန္တရာယ် ကူညီပေးရေး နှင့် ရေတပ်ဆိုင်ရာ သံတမန် လုပ်ရှားမှုများ အ တွက် လို့ ဆိုပေမယ့် တဖက်မှာတော့ တရုတ်အလံကို နိုင်ငံတကာမှာ လွှင့်ထူဖို့ ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ဤလှုပ်ရှားမှုများဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလတွေမှာ ဝေးကွာသော ပင်လယ်ပြင်ကာကွယ်ရေး၏ စစ်အတွင်း အသုံးချနိုင်မှုများကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။
၎င်းအယူအဆဟာ ကာကွယ်ရေး ဗျူဟာလို့ ဆိုသော်ငြားလည်း စစ်တွင်းကာလအတွင်း ထိုးစစ်ဆင်မှုများ ဖြစ်လာဖို့ အားပေးနေတယ်” လို့ ထို နှစ်ယောက်က သတိပေးထားပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထုတ်ပြန်မှုများကို ကိုးကားပြီး “သတင်းရင်းမြစ်တခုမှ ရေတပ်အား တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဝေးကွာတဲ့ နေရာမှာ အဓိက မဟာဗျူဟာမြောက်လမ်းကြောင်း များကို ထိန်းချုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
တခြား ရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့ လေယာဉ်တင် သင်္ဘောများ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် “လက်သီး” ဟုခေါ်သည့် တပ်ဖွဲ့များကို အသုံး ပြုဖို့ တိုက်တွန်း ထားပါတယ်။
နောက်ထပ် စစ်တွင်း စစ်ဆင်ရေး တစ်ခုကတော့ ပင်လယ်နှင့် နီးတဲ့ စစ်မြေပြင်မှာ လွယ်ကူစွာ ဖိအားပေးနိုင်ဖို့ ရန်သူ့ရဲ့ ဗျူဟာအရ နက်ရှိုင်းတဲ့ နေရာမှာရှိတဲ့ အရေးပါတဲ့ ဆုံမှတ်များနှင့် တန် ဖိုးမြင့် ပစ်မှတ်များကို ထိုးဖောက် တိုက်ခိုက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။.
ယခုနှင့် နောင်ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ် ရှိသည့် အကြောင်းများ
တရုတ် ရေတပ်ဟာ မည်သည့် ရန်သူနှင့်မဆို ကြီးမားတဲ့ ပြိုင်ဘက် ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းရဲ့ လက်တွေ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကတော့ မျှော်လင့်ထားသည်နှင့် မကိုက်ညီသေးပါဘူး။
ပထမဆုံး အနေဖြင့် လေယာဉ်တင် သင်္ဘော အုပ်စုများမှာ လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ လေယာဉ်များထက် ပိုမို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ လေတပ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေ လိုအပ်နေပါတယ်။
အသုံးပြုနေဆဲ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ၂ စီးဟာ ဆိုဗီယက် ခေတ်ဒီဇိုင်းနှင့် သမားရိုးကျ စွမ်းအင်သုံး လေယာဉ်တင် သင်္ဘော ဟောင်းများသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဒီသင်္ဘောတွေဟာ သူ့ဟာနှင့် သူကို သယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လေယာဉ် အရေအတွက်၊ သွားလာနိုင်တဲ့ အကွာအဝေး နှင့် လေ ယာဉ် တွေမှာ တင်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဝန်တွေကို အကန့်အ သတ် ဖြစ်နေစေပါတယ်။
အတိုချုံးအားဖြင့် ဆိုရရင် ဒီလေယာဉ်တင် သင်္ဘော ၂ စီးဟာ အမေရိကန်တို့ရဲ့ လေယာဉ်တင် သင်္ဘော ၁၁ စီး နှင့် လားလားမျှ မနီးစပ်နိုင်သေးပါဘူး။ အမေရိကန်လေယာဉ်တင် သင်္ဘောတွေထဲက တစ်စီးထဲနဲ့ တောင် နိုင်ငံရပ်ခြားက ကမ်းရိုးတန်းမှာ သွားလာနေစဉ် ခြိမ်းခြောက်မှု တစ်ခုအဖြစ် ကြေငြာ နိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန် ပိုင်ဆိုင်သည့် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောနှင့် ကုန်ရေ နှစ်သွယ် စစ်ဆင်ရေး လေယာဉ်တင် သင်္ဘောများ
အမေရိကန်ရေတပ် အင်စတီကျူမှ ထုတ်ဝေသည့် ” Combat Fleets of the World” စာ အုပ် ၏ အယ်ဒီတာ ဖြစ်သူ အဲရစ် ဝါ့သိုင်းမ် မှ
” အမေရိကန်ရေတပ်၏ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှင့် ၎င်း၏ လေတပ်တခုဟာ နိုင်ငံ တော်တော် များများရဲ့ လေတပ် တခုလုံးထက်တောင် သာ လွန် တဲ့ စွမ်းအင် ရှိတယ်”
တရုတ်နိုင်ငံ ရေတပ်မှာတော့ ဒီလို စွမ်းဆောင်နိုင်မှု မရှိသေးပါဘူး။ ဒီနေ့အထိ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ရေတပ် စိုးမိုးမှုဟာ ဘယ်လောက် အကန့် အသတ်ထိ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။
တရုတ် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောများဟာ ပစိဖိတ်အနောက်ပိုင်းထက် ပိုပြီး သွားလာနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
တရုတ်‌ရေတပ်မှ စစ်သင်္ဘောများဟာ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ၊ မြေထဲပင်လယ် နှင့် မြောက်အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာမှ ရုရှား မြောက်ပိုင်း ဆိပ်ကမ်းများသို့ ရောက်ရှိခဲ့မှုဟာ အ ကြိမ် ရေ အနည်းငယ်မျှသာ ရှိပြီး အရေအတွက်အားဖြင့် လည်း အနည်းငယ်သာ ရှိပါတယ်။
၂၀၂၁ မတ်လ ဆန်း ကပဲ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ Global Times မှ လမ်းညွှန်ပဲ့ထိန်းဒုံးတင် ဖျက်သ င်္ဘော တစ်စီး ဦးဆောင် တဲ့ အနည်းဆုံး စစ်သင်္ဘော ၅ စီးပါတဲ့ အုပ်စုဟာ အီကွေတာကို ဖြတ်ကျော် ပြီး ပင်လယ်ပြင်သို့ ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီ ရေယာဉ်အုပ်စုဟာ ပင်လယ်ပြင်မှာ သုံးပတ်ခန့် ကြာမြင့်ဖွယ်ရှိပြီး အီကွေတာကို ဖြတ်သွားတဲ့ နေရာ အတိအကျကိုတော့ ဖော်ပြ ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
ဒီလို စစ်ဆင်ရေးဟာ တရုတ်ရေတပ်ကို ပင်လယ်ပြာ ရေတပ်အဖြစ် တည်ဆောက်ရာမှာ အ ကျွမ်း တဝင် ဖြစ်စေဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းမှာ ပါရှိပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်က အလားတူ လေ့လာရေးအဖွဲ့ဟာ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ Global Times သတင်းစာက ဖော်ပြ ခဲ့ဖူး တယ်လို့ အမေရိကန် လေတပ်၏ လေ ကြောင်း တက္ကသိုလ် တရုတ် လေတပ်လေ့လာရေးဌာနမှ သုတေသန ညွှန်ကြားရေးမှူး ရိုဒါရစ်ခ် လီး က ပြောပါတယ်။
ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေရဲ့ အဓိကလုပ်ဆောင်မှုကတော့ ဟာဝိုင်အီကျွန်းလို ဝေးလံလှတဲ့နေရာမှ အမေရိကန်စစ်တပ်တွေ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှု ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ တိုးတက်ဖို့ ဖြစ်တယ် လို့ ဂျိမ်းစ်တောင်း ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ တရုတ်အကြောင်း အတိုချုပ်မှာ လီ က ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်ရေတပ်ဟာ ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးများ၊ ပျက်စီးမှု ထိန်းသိမ်းရေး၊ ထောက်ပို့နှင့် ထောက်လှမ်း ရေး ကိစ္စများမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ တိုး တက်မှုတွေရှိလာပြီး မကြာမီ စစ်အတွင်း အမေရိကန် ရေတပ်ဆိပ်ကမ်း အဆောက်အအုံများ၏ တံခါးဝအထိ လုပ်ဆောင် လာနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လေ့လာသုံးသပ်သူများ ကတော့ ဒီလိုဖြစ်နိုင်ဖို့ရာ ဆယ်စုနှစ်တွေ ကြာမြင့်ဦးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးဌာနမှ တရုတ်ကာကွယ်ရေး မူဝါဒ အကြီးအကဲ မီယာ နျူဝမ်စ်က တရုတ်ပြည်ဟာ ၂၀၄၉ ခုနှစ်မှာ စစ်ပွဲများကို တိုက်ခိုက် အနိုင်ယူနိုင်မည့် တကမ္ဘာလုံးအတိုင်း အတာဖြင့် စီမံနိုင်သော စစ်တပ်ကို ပိုင်ဆိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားတယ် လို မတ်လဆန်းက Think Tank သုတေသနာ အဖွဲမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် နှစ်စဉ်ကမ္ဘာ့ “Military Balance” စာတမ်းမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ့ ၂၀၄၉ နှစ်ကာလ တလျှောက် လေ့လာသူများဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာဖို့ရာအတွက် အချို့သော စံနှုန်းများကို ရှာဖွေနေကြ ပါတယ်။
အဲဒီ့အထဲမှာ တရုတ်ရေတပ်ကို ထောက်ပံ့ဖို့ရာအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ စစ်အခြေစိုက်စခန်း တည်ဆောက်မှုတွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အာဖရိကတိုက် ဦးဂျိုရှိ ဂျီဘူတီ နိုင်ငံတွင်သာ အခြေစိုက် စခန်းတစ်ခု ရှိသေးတာပါ။
လက်ရှိမှာ ထိုအခြေစိုက်စခန်းများကို ထောက်ပံ့ဖို့ရာအတွက် လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို အကြီးအကျယ် တည်ဆောက်နေပါတယ်။
တရုတ်လေယာဉ်တင် သင်္ဘောအုပ်စုဟာ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာသို့ ကျယ်ပြန့်စွာ နေရာချထားမှု ပြု လုပ် လာရင်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခု ဖြစ်လာမယ်လို့ နိုင်ငံတကာ မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးအဖွဲ့မှ ကာကွယ်ရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ချိုင်းလ် က ပြောပါတယ်။
တခြား သွားလာနိုင်ခြေရှိတာကတော့ အာတိတ် နှင့် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတွေ ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ချိုင်းလ်က ပြောပါသေးတယ်။
ထိုင်ဝမ်နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်း
မကြာမီကာလအတွင်း တရုတ်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှု ဗဟိုချက်မှာ ၎င်း၏ သမိုင်းအရနှင့် ပိုင်းခြားမရသည့် အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် နယ်မြေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ထိုင်ဝမ်ကျွန်း ဖြစ်လာပါတယ်။
၂၀၁၉ ဘေဂျင်း ကာကွယ်ရေး စက္ကူဖြူစာတမ်းအရ ဒီကျွန်းရဲ့ အာဏာပိုင်များဟာ နိုင်ငံခြား သြဇာ အင်အားကို ငှားယူပြီး တင်းမာမှုနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့နိုင်မှုများကို မြင့်တက် လာနေစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေး” ခွဲထွက်ရေး တပ်ဖွဲ့များနှင့် သူတို့၏ လုပ်ရပ်များဟာ ထိုင်၀မ် ရေလက် ကြား အတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ချက်ချင်း ခြိမ်းခြောက် နေခြင်းနှင့် တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းရေးကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေသည့် အကြီးမားဆုံး အတားအဆီး ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၁ က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တရုတ်ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက စစ်တပ်၏ ရပ်တည်မှုကို ရှင်းလင်းပြောကြားရာမှာ
“ထိုင်ဝမ်ဟာ တရုတ်ရဲ့ ခွဲခြားမရတဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်တယ်”
လို့ အကြီးတန်း ဗိုလ်မှူးကြီး ဝူချန်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် “တရုတ် ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ဟာ ‘ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေး’ ခွဲထွက်ရေး သမားများ၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို အပြီးတိုင် ချေမှုန်းရန်နှင့် နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာ အာဏာ နှင့် နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု ကို ခိုင်မာစွာ အကာအကွယ်ပေးရန် လိုအပ်သော ဆောင်ရွက်မှု များကို ပြုလုပ်လိမ့်မယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်က သမ္မတ ရှီရဲ့ မိန့်ခွန်း တခုမှာလည်း “မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ တစ်လက်မကိုမျှ ပေးအပ်နိုင်မယ် မဟုတ်”။ “တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာ၊ နယ်မြေ တည်ငြိမ်မှု နှင့် နိုင်ငံ အပြည့်အဝ ပေါင်းစည်းဖို့ရာအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက် သင့်တယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Type 075 ကုန်းရေ နှစ်သွယ် စစ်ဆင်ရေး သင်္ဘောသစ်
ထိုင်ဝမ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး နည်းလမ်းများစွာ ရှိသည့် အထဲမှ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ဖို့ကို သမ္မတ ရှိဟာ ယနေ့ တရုတ် ရေတပ်ကြီးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ကော်ဗက် စစ်သင်္ဘောများနှင့် ကမ်းရိုးတန်း ကင်းလှည်း ရေယာဉ်များကဲ့သို့ သေးငယ်သော ရေယာဉ်များဟာ ကမ်းခြေအနီးရှိ တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ထိုင်ဝမ်နှင့် တရုတ်ပြည်မကြီး အကြားရှိ ရေတိမ်ပိုင်းဟာ ကီလိုမီတာ ၁၃၀ (မိုင် ၈၀) လောက်သာ ရှိပြီး ကော်ဗက် စစ်သင်္ဘောများအတွက် အကောင်းဆုံး အကွာအဝေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ၆ ဒါဇင်လောက်ရှိတဲ့ ကော်ဗက် စစ်သင်္ဘောတွေဟာ ဥပမာ အားဖြင့် သင်္ဘောဖျက်ဒုံး ၂ ခုစီ သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး ကီလိုမီတာ ၂၀၀ (၁၂၅) မိုင်လောက် အတွင်း စစ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ၃ ဒါဇင် လောက်ပဲရှိမယ့် ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ အမေရိကန် ရေတပ်ရဲ့ ဖျက်သင်္ဘောများအတွက် ဒုံးကျည်များကို ခြေရာကောက် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ ခေါင်းကိုက်စရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ရေတပ်ရဲ့ သင်္ဘော တည်ဆောက်မှုများ ကိုလည်း ထိုင်ဝမ်ရှိ မှန်ဘီလူးများမှ တဆင့်တောင် မြင်နိုင်ပါတယ်။
၂၀၂၀ နှောင်းပိုင်းမှာ Type 075 အတန်းအစား တန် ၃ သောင်းခွဲမှ ၄ သောင်းရှိ ဘက်စုံသုံး ရဟတ်ယာဉ်တင် သင်္ဘောဟာ တရုတ်လေယာဉ်တင် သင်္ဘော ၂ စီးရဲ့ တဝက်လောက်ရှိပြီး ပင်လယ်ပြင် စမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
မဟာဗျူဟာနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှု စင်တာမှ သုံးသပ်ချက်အရ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုန်းရေနှစ်သွယ် စစ်ဆင်ရေး သင်္ဘောများထဲက တစ်စီး ဖြစ်တဲ့ Type 075 အတန်းအစား သင်္ဘောဟာ ရဟတ်ယာဉ်များကို တင်ဆောင်ဖို့ရာ ကြမ်းပြင် ပါဝင်ပြီး ရှပ်ပြေးယာဉ်များ၊ ကုန်းရေနှစ်သွယ် သံချပ်ကာယာဉ်များကို တင်ဆောင်စစ်ဆင် နိုင်ပါတယ်။
၎င်းမှာ မြေပြင် တပ်ဖွဲ့ ၉၀၀ လောက်ကိုလည်း တင်ဆောင်နိုင်ပြီး ရဟတ်ယာဉ်များ ရှပ်ပြေးယာဉ်များကို အသုံးပြုပြီး ကမ်းတက်နိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိ ၃ စီး ထုတ်လုပ်နေတဲ့ထဲမှ တစ်စီး ပြီးစီးပြီ ဖြစ်တဲ့ ဒီ သင်္ဘော အမျိုးအစားဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပြင်ပရှိ စစ်ဆင်ရေးများအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်မှု၊ ဆင်းသက်မှု နှင့် မြေပြင် တပ်ဖွဲ့များကို ထောက်ပံ့ဖို့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို သိသိ သာသာ မြင့်တက်စေတယ်လို့
သုံးသပ်သူများ ဖြစ်တဲ့ မက်သရူး ဖန်နီရိုလေ နှင့် ဂျိုးစ်ဖ် ဘာမျူဒက်ဇ် ဂျူနီယာ တို့က ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအတန်းအစားသစ် သင်္ဘောဟာ တရုတ်၏ ကုန်ရေး နှစ်သွယ် စစ်ဆင်ရေး စွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်စေတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တရုတ်ဟာ ထိုင်ဝမ်ကို ကျူးကျော်ရာမှာ ကျွန်းကို ထိန်းချုပ် ပိုင်ဆိုင်ဖို့ စစ်သည် ၉၀၀ ထက် ပိုမို လိုအပ် ပါလိမ့်မယ်။
ကမ်းခြေ စောင့်တပ်ဖွဲ့တွေ၊ ရေကြောင်း တပ်ဖွဲ့တွေ အပါ အဝင် ဘယ်သူမှ မထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ပမာဏကို ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကုန်သွယ်ရေး သင်္ဘော တွေကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
“တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ရေလက်ကြားကို ဖြတ်ပြီး အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ဝင်ရောက် ကျူး ကျော်ပါက အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ ယူဆတာ ပညာရှိရာ ရောက်တယ်” လို့
ဗြိတိသျှတပ်များ ဒုတိ ယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ပြင်သစ်မှ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်ခဲ့မှုကို နှိုင်းယှဉ်မှု ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ အမေရိကန် လုံခြုံရေး စင်တာ၏ လေ့လာသူ ရှဂတ်က ကွန်ဂရက်ကို ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကျူးကျော်မှုကို ဒန်းကတ် ဆုတ်ခွာရေး (ဗြိတိသျှနှင့် ပြင်သစ်တပ် စုစုပေါင်း ၃ သိန်း ၃ သောင်း ၈ ထောင်ဟာ ဒန်းကတ်မြို့ တွင် ဂျာမနီများ၏ ဝိုင်းဝန်း ပိတ်ဆို့မှုကို ခံထားရစဉ် ရရာ သင်္ဘောများဖြင့် ဗြိတိန်သို့ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်) ရဲ့ ပြောင်းပြန်လို မြင်ကြည့် ဖို့ရာ အကြံပေးထားပါတယ်။
“ထိုင်ဝမ်ကို ကျူးကျော်တဲ့အခါမှာ ဒန်းကတ် ရဲ့ ပြောင်းပြန် လိုပဲ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မီးခိုးရောင် ဆေး သုတ်ထားတဲ့ တရုတ် ကုန်းရေနှစ်သွယ် စစ်ဆင်ရေး သင်္ဘောနှင့် အစောင့် လိုက် သင်္ဘော ဒါဇင်လောက်အစား ငါးဖမ်းလှေ ရာပေါင်းများစွာရယ်၊ ကုန်သွယ်ရေး သင်္ဘောတွေရယ်၊ ကမ်း ခြေစောင့် သင်္ဘောတွေရယ် နှင့် ရေကြောင်း အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး အုပ်ချုပ်မှု သင်္ဘောတွေရယ်ကို ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားမှာ အပြည့် တွေ့ရလိမ့်မယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
CNN မှ China has built the world’s largest navy. Now what’s Beijing going to do with it? ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်လည် ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Tagged ChinaChina NavySouth China SeaTaiwanUS Navy